Bulshada Deegaanka Cowsane oo isku tashi ah ku dhistey Xarumaha Waxbarashada iyo Caafimaadka. – Geelle Magazine
Bulshada Deegaanka Cowsane oo isku tashi ah ku dhistey Xarumaha Waxbarashada iyo Caafimaadka.
Dadka kunool deegaanka Cowsane ee gobolka sanaag ayaa hab isku tashi ah ku dhistey Xarumaha caafimaadka, waxbarashada iyo saldhiga deegaanka.
Gudoomiyaha deegaanka cowsane ee Gobolka sanaag Daahir Ciise Warsame oo lahadlay warbaahinta dowlada Puntland ayaa ugu horayn ka warbixiyay baahiyaha deeganka cowsane ee gobolka sanaag, waxa uuna fariin udirey dowlada Puntland.
Dadka degan deegaanka cowsane ee gobolka sanaag ayaa ah dadki ay xoolahoodu ka dhamaysey abaartii ka dhacdey gobolka, waxaana ay haatan ay haatan noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha balse roobabki sanadki udanbeeyay kada’ay gobolka ayaa beerahoodi kala tagay dalagyadi beeraha, iyadoo ay udheer tahay saamaynta ayaxa.
Gudoomiyaha Deegaanka cowsane ee gobolka sanaag Daahir Ciise Warsame ayaa dowlada Puntland ka codsadey in ay kaqayb qaadato goobaha ay bulshadu habka isku tashiga ah kudhisteen sida iskuulka deeganka, xarunta caafimaadka iyo saldhiga deegaanka.
Xarunta Caafimaadka ee deegaanka cowsane ayaa haatan shaqaynaya mudo kudhow 6 lixbilood inastoo uu yahay mid aan si rasmi ah loodhamaystirin hadana waxa uu bixiyaa adeegyada asaasiga ah ee hooyada iyo dhalaanka.